Global Voices teny Malagasy » Tontolon’ny Arabo: Very eny an-dalana ny asa? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Febroary 2009 18:48 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika Koloina RAMASINANDRO
Sokajy: Arabia Saodita, Emirà Arabo Mitambatra, Jordania, Koety, Fampandrosoana, Sendikà, Toekarena sy Fandraharahàna
Araka ny lohatenim-baovao  izay milaza mazava ny faharavan’ny toekarena dia manohy ny famehezan-kibony tahaka ny governemanta ireo orinasa sy ny isam-batan’olona, ireo mpitoraka blaogy manerana an’I tontolon’ny Arabo dia miditra an-tsehatra ary manontany hoe: “ho avy eto aminay ve ny tsy fisian’ny asa?”
Any Arabia Saodita, manoratra Nzingha  momba ny havany very asa tao aorian’ny “fikorosoan” ny orinasa iasany. Manazava izy:
Nahita asa tamin’ny volana vitsivitsy lasa teo ny zaobaviko, mananotena ary mitaiza zaza telo. Mandray telefonina amina orinasa mivarotra hetra ho an’ny fiara no asany, hita feno hafaliana tokoa izy amin’izany asany izany ary vola fanampiny ampidiriny ao an-tokantrano. Amin’ny maha-mananotena azy sady efa nanam-bady efa niasa tao amin’ny governemanta dia mandray fanampiana 1500 SR (pension) isam-bolana izy. Mitentina 375 dolara izany ary tsy ampy ny vidin’ny bisikileta izay novidiko akory. Tsy ampy hivelomana ny vola mitentina 1500 SR, indrindra fa manalehibe zaza anankitelo mbola mitombo ianao.
Mariho tsara fa ampiasaiko ny matoanteny amin’ny fotoana lasa mba hanazavako ny vanim-potoana niasany hoe tsy an’asa tokoa izy ankehitriny. Voaroaka izy niaraka tamin’ireo mpiasa hafa tao amin’ny orinasa satria rendrika ny orinasa. Nomena fampilazana roa herin’andro izy ,dia avy eo, izay no izy fa vita. Betsaka ny vehivavy eto amin’izao tontolo izao no mitovy tantara aminy, miasa ianao amin’ny andro iray dia avy eo mahazo filazana fandroahana indrindra rehefa heverinao fa mipaka eran’izao tontolo izao ny olana ara-toekarena. Na dia izany aza, toy ny vehivavy avy any Saodita dia dia voafetra mafy dia mafy ny fahafahany miasa izay hita fa tsy mitovy amin’ireo orinasa maneran’izao tontolo izao ary izany antony izany anefa dia satria vehivavy izy.
Avy amin’ny UAE, manao tamba-zotra mankany amin’ny horonantsary CNN izay miady hevitra momba ny vokatry ny olana ara-toekarena ao Dubai I the Grapeshisha Blog  ary manamarika izy fa:
Fa raha miheno tsara ianao, dia midika zavatra ny fihenan’ny mponina 8% – Miha-mihena ny asa… eo amin’ny orinasa sasantsasany.
Miresaka mikasika ny blongana I WebJunky  manao hoe:
Maminaviana amim-pahatsoarana aho fa ny tsy fisian’ny asa dia hitombo avo roa heny. Fara fahakeliny eo amin’ny 6 – 12 volana eo ho eo no mitohy milentika I Dubai alohan’ny isian’ny singa enti-milaza ny fiverenan’ny varotra amin’ny laoniny ao amin’ny faritra ankehitriny.
Manome tamba-zotra ao amin’io horonantsary io ihany I Moey , avy any Jordanie izay miasa sy mipetra ao Kuwait ary manontany izy hoe:
Tokony hiandrandra zavatra ao Kuwait ve isika ?
Dia namaly azy ny mpamaky The M Code :
Tsy tokony hiandrandra n’inona n’inona n’aiza n’aiza isika, olana ara-toekarena fahobe io fa ny olona kosa no mijery an’I Dubai hoe voa mafy izy satria jeren-dry zareo fa miakatra izany. Antenaina fa ho tafarina izany indray andro any. Ireo mantsy no rehareha sy fonenana ho an’ny Arabo manerana izao tontolo izao, mirary ny tsara indrindra ho azy ireo aho.
Tao amin’ny UAE community blog dia nisy lehilahy mpivazivazy nanao izao filazana manaraka izao mba:
Hibaboka sy hanamafy ireo mpandraharaha Dubai telo voatokana fa ny toe-draharahan’ny tsena dia tena mari-toetra tokoa ka ny tsaho milaza fa malemy ny toe-karena sy ny fomba fijery malemy dia propagandy fotsiny ihany. Manamafy ny fankasitrahana ireo fahafahana manao zavatra maro ho an’ny Dubai ny mpandraharaha Sinoa, Anglisy ary Indianina raha toa ka ny governemanta atokisana no maniditsidiana tsy afa-maanapaka ny hitandrovana ny fiarovana azy ireo.
Ny vazivazin-teny ao anatin’ity blaogy ity dia tsy ho very ho an’ny mpamaky, izay nandefa ny fanamarihan’izy ireo eto 
Lohahevitra ao amin’ity bolongana ity ny fihenan’ny asa ao Dubai, nentin’ny Shamsi ao amin’ny Dubai Metblogs .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/02/17/1569/
 UAE community blog : http://uaecommunity.blogspot.com/2009/02/dubai-businessmen-all-is-good.html